Maamulka SOMALIMEMO oo Umadda Soomaaliyeed Ugu Hambalyeeyay Bilashada Bisha Ramadaan.
Saturday April 02, 2022 - 06:50:22
Maamulka iyo howlwadeenada Shabakadda Islaamiga ah ee SomaliMeMo waxay umadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba ugu hambalyaynayaan bilashada Bisha barakeysan ee Ramadaan 1443 Hijriya.
SOMALIMEMO waxay muslimiinta soomaaliyeed ku dhiiri gelinaysaa in ay ka faa’idaystaan Fadliga badan ee kujira bisha Ramadaan waana Fursad sanadkiiba hal mar nasoo marta " Hambalyo Ramadaan Kariim ayaan leenahay Shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah meel walba oo ay joogaan dal iyo dibadba,runtii waa bil dhammaanteedba ah kheyr iyo barako ayna haboontahay in fadligeeda laga faa'iideysto"ayaa lagu yiri war rasmi ah oo kasoo baxay shabakadda SOMALIMEMO .
Wariyaasha ka howlgalada SomaliMeMo ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeynaya in aAlle dalka nooga xoureeyo ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo kuwa kale ee Afrikaanta ah kuwaasi oo duullaan gardarra ah kusoo qaaday gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Bisha Ramadaan oo ah bil sadaqada la badiyo fadli dheeri ahna leh ayaan dadka hantida heysta ugu baaqaynaa in ay caawiyaan dadka fuqarada iyo masaakiinta ah iskuna naxariistaan.
Ugu dambeyn muslimiinta waxaan xusuusinaynaa in bisha Ramadaan ay tahay bil xasanaadka la-labalaabo waxaana si gaar ah muslimiinta uxuusinaynaa badinta akhrinta qur'aanka kariimka iyo tukashada salaadaha Taraawiixda iyo Tahajudka.
Xukuumadda Rooble oo lacag malaayiin dollar ah ku wareejisay Imaaraatka Carabta.
31 sano oo go'intaan ah kadib maamulka 'Somaliland' oo aan wali helin wax aqoonsi ah [Warbixin].
TPLF iyo Xukuumadda Addis Ababa oo qarka u Saaran In ay markale Foodda Isdaraan.
Ciidamada maamulka 'Galmudug' oo dib ula wareegay magaalada Dhuusamareeb [Warbixin].